ဟေ့ကောင် မင်း ဖာခေါင်းစကား မပြောနဲ့ စကားကို တည်တည်တံ့တံ့ပြောစမ်း - Apannpyay
Home > Uncategorized > ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ > ဟေ့ကောင် မင်း ဖာခေါင်းစကား မပြောနဲ့ စကားကို တည်တည်တံ့တံ့ပြောစမ်း
ဟေ့ကောင် မင်း ဖာခေါင်းစကား မပြောနဲ့ စကားကို တည်တည်တံ့တံ့ပြောစမ်း
November 14, 2017 Apann Pyay
ကေတီဗွီ မာဆတ်နဲ့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်စား နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝကို စိတ်ဝင်စား ဖွယ်သနားဂရုဏာသက်ဖွယ် ရသမြောက် အောင်တခမ်းတနားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သူတို့နောက်ကြောင်း စာပေတွေတော်တော်များများဖတ်ဖူးပါတယ်။
အဖေသေလို့ အမေမုဆိုးမကြီးကိုလုပ် ကြွေးနေရတဲ့အကြောင်း..။ မောင်လေး ညီမလေးတွေကျောင်းထား ပေးရကြောင်း..။ အမေအိုကိုဆေးကုပေးနေ ရတဲ့အကြောင်း။ ဒီအလုပ်ကို စက်စုပ်ရွံရှာကြောင်း ။
ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားက ကလေးတွေနဲ့ပစ်ထားခဲ့လို့ ဒီလောကထဲရောက်ခဲ့ကြောင်း..။ သစ္စာမရှိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ကြောင့် ရိုင်းရိုင်းပြောရ ရင်ဖာလောကထဲရောက်လာကြောင်းပေါ့။
အပြင်လောကမှာ လိမ်တဲ့ညာတဲ့သူဆို ကျမတို့အချင်းချင်းတောင် ဟဲ့ကောင်မစကားကိုအမှန်ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး တအားဖာစကားတတ်တာဆိုတာမျိုး…ပေါ့..။
ဥပမာ ။ ။ ဟေ့ကောင် မင်းဖာခေါင်းစကား မပြောနဲ့ စကားကိုတည်တည်တံ့တံ့ပြောစမ်းဆိုတာမျိုး ကြားဖူးမှာပါ
ကျမ ဝါသနာအရ ဒီလောကထဲရောက်လာရပါတယ်လို့ ဝန်ခံတဲ့ ဖာသည်မရှိပါဘူး။
သူတို့ကိုသနားလို့ကယ်တင်ကြည့်ပါ မရပါဘူး။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်ပေးကြည့် စိတ်မဝင်စားပါဘူး ပင်ပင်ပမ်းပမ်းမလုပ်ချင်ဘူး
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပျော်ပါးခငွေ က ၆၅၀၀ ပါ ခေါင်းကဘယ်လောက်ဖြတ်ပါတယ်။ နေတဲ့အတွက်အိမ်လခ။ နောက်ပြီးစားစရိတ် ဖြတ်ခံရလို့ ယောက်ျားတစ်ဦးနဲ့ပျော်ပါးမှ ၁၅၀၀ ပဲရပါတယ်ဆိုရင် ပန်းရံတစ်ရက် သုံးလေးထောင်ရတယ် လုပ်မလားမေး နေပူမခံနိုင်ဘူး..။
အိမ်ဖေါ်လုပ်မလားမေး ပင်ပမ်းတယ် ဈေးရောင်းမလားမေး ဝါသနာမပါဘူး..။
စက်ချုပ်သင်ပေးမယ် တစ်ယောက်ကိုပြောဘူးတယ် စက်ချုပ်အခမဲ့သင်ရင် စက်ဆရာမရဲ့ ကလေးထိန်း အဝတ်လျော် မီးပူတိုက် ထမင်းချက်တော့လုပ်ပေးရမယ် ထမင်းကြွေးမယ် ဆရာမရဲ့ အကျလေးတွေဆင်မယ် ပညာသင်လို့ တတ်ရင် လက်ခနေ့တွက်လေးပေးမယ် နောက်ဆိုင်ခွဲတဲ့အထိကူညီမယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့…။
ဆရာမလင်မယားကလည်း သဘောမနောကောင်းတော့ သူ့ဘဝလေးကယ်တင်ချင်လွန်းလို့ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း အပြည့်အဝထောက်ခံပြီးအပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လစ်ရင်လစ်သလို အော်ဒါလိုက် နောက်ဆုံးစက်ဆိုင်ရှေ့ ကောင်လေးတွေတရုန်းရုန်း ဆရာမယောက်ျားနဲ့ အာဝါဟ ဝိဝါဟတွေဖြစ်ကုန်လို့ ရောကြေးတွေပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဆရာမနဲ့ကျမနဲ့ မိတ်တွေပျက် ကျမဆိုအသေမုန်းခံခဲ့ရတာ ဖာစကားယုံပြီးကယ်တင်မိလို့ပါ..။
ုပြည့်တန်ဆာမကို အရင်းအနှီးထုတ်ပေးကြည့် အဲ့ပိုက်ဆံကုန်တဲ့နေ့ တန်း ပြီး ဖာအိမ်ရောက်သွားတော့တာပါပဲ
ဖာသည်ကနေ ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ်လုပ်စားပြီး မိန်းမကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာတော့ မကြားဖူးပါဘူး
အခြေခံစိတ်ဓါတ်မကောင်းတော့ ဝါသနာနဲ့ပေါင်းပြီးဖြစ်သွားတဲ့ ဖာဇတ်လမ်းတွေ ကျမတော်တော်များများ အပြင်လောကမှာ လက်တွေ့နားထောင်ဖူးပါတယ်။ မြင်ဖူးကြုံဖူးတွေ့ဖူးပါတယ်။
နောက်ကြောင်းတွေကအကုန်နီးနီး တူနေကြပါတယ် သနားအောင် လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဇတ်လမ်း ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတုတွေနဲ့မျက်ရည်ကျလောက်အောင်သရုပ်ဆောင်ကောင်းကြပါတယ်
သူတို့ပြောသလိုဆင်းရဲချို့တဲ့တိုင်းသာဖာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် ပန်းရံဆိုတာမရှိပါဘူး အိမ်ဖေါ်ဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး အလုပ်သမား နေ့စားဆိုတာမရှိတော့ဘူး ပလပ်စတစ်ကောက်တဲ့သူ့မရှိဘူး ဈေးတောင်းခေ့ါင်းပေါ်ရွက်တဲ့သူမရှိဘူး ပဲပြုတ်သည်ဆိုတာမရှိဘူး အကုန် ဖာတန်းရောက်ကုန်မှာပေါ့…။
ကျမတွေ့ဖူးတဲ့မိန်းကလေးး တော်တော်လှတယ် ငယ်တယ် အရိုင်းပန်းလေးပါ တော်တော်ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးတာပါ
တောနယ်ဘက်က ရယ်ခြင်းပြုံးခြင်းမရှိဘူး မျက်နှာလေးက ဆင်းရဲတော့ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တည်ငြိမ်ပါတယ်
ဗျူတီပါလာမှာ အပ်ပေးထားတယ် မနက်အစောကြီးထတယ် ။
ထမင်းချက် အဝတ်လျော် ကလေးထိန်း အိမ်ဖေါ်လိုအကုန်လုပ်ပေးရတယ် အိမ်အလုပ်တွေ မြန်မြန်ပြီးမှ ဆိုင်ရှင်က ဆံပင်ပညာသင်ပေးပါတယ်
သူက စေတနာပါတယ်။ခေါင်းလျော် အနှိပ်ကောင်းတော့ လာတဲ့သူက ခေါင်းလျော်ရင်သူနဲ့ပဲနှိပ်ချင်ကြတယ် ပိုက်ဆံပေးပြီးသင်ထားတဲ့သူက လုပ်ပေးရင် ဧည့်သည်မျက်လုံးက ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ဟိုကလေးမရော မေးမေးနေတော့ နောက်ပိုင်းဆိုင်ရှင်က မျက်နှာသာပေးတယ်။ သူ့ကို အိမ်ဖေါ်လိုမဆက်ဆံတော့ပါဘူး ဆံပင်လေးလှလှပပပြင်ပေးပြီး အဝတ်အစားလေးဆင်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်တဲ့အထိ ဆိုင်မှာမြဲတယ် ဆိုင်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းခံခဲ့ရတော့ နောက်ပိုင်းမိသားစုလိုဖြစ်ပြီး ခုဆို အဲ့ဆိုင်မှာ ပိုင်ရှင်ပြီးရင်သူပါပဲ ။
သူ့လက်သူခြေမို့ သူ့မောင်လေးနဲ့ သူ့အမေကို ခေါ်ထားပါသတဲ့။
မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတိုင်း ဖာမဖြစ်ပါဘူး။ မရှက်မကြောက်လုပ်စားတတ်ရင် ထမင်းမငတ်ပါဘူးလို့ပြောပြချင်တာပါ ကျမကတော့ ဘယ်တော့မှဖာစကားကိုမယုံပါဘူး ယောက်ျားတော်တော်များများ ကတော့ ဖာစကားယုံပြီး သနားတတ်ကြတယ် ကယ်တင်ချင်ကြတယ် ကိုယ်ချင်းတွေတအားစာတတ်ကြတယ်။
အရမ်းကိုကူညီချင်ကြတယ် ယောက်ျားတော်တော်များများနဲ့ပါတ်သက်ထားတဲ့ဖာသည်တစ်ယောက်မှာ ပါလာနိုင်တဲ့HIV နဲ့တခြားရောဂါ အကြောင်းထက် ဖာသည်တစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကြောင်းက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းခဲ့တာလားးဖာသည်တွေက ပဲစည်းရုံးရေးကောင်းတာလား။ခုတစ်လောဖာ post တွေ ကိုတခမ်းတနားရေးထားတာတွေ့ရပြီးCom တွေမှာမျက်ရည်ချောင်းတွေစီးနေတာတွေ့လို့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖာသည်မရာဇဝင်ရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Mya’Nan Thida Nwe
ဟကေ့ောငျ မငျး ဖာခေါငျးစကား မပွောနဲ့ စကားကို တညျတညျတံ့တံ့ပွောစမျး
ကတေီဗှီ မာဆတျနဲ့ ပွညျ့တနျဆာလုပျစား နတေဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ဘဝကို စိတျဝငျစား ဖှယျသနားဂရုဏာသကျဖှယျ ရသမွောကျ အောငျတခမျးတနားရေးဖှဲ့ထားတဲ့ သူတို့နောကျကွောငျး စာပတှေတေျောတျောမြားမြားဖတျဖူးပါတယျ။
အဖသေလေို့ အမမေုဆိုးမကွီးကိုလုပျ ကွှေးနရေတဲ့အကွောငျး..။ မောငျလေး ညီမလေးတှကြေောငျးထား ပေးရကွောငျး..။ အမအေိုကိုဆေးကုပေးနေ ရတဲ့အကွောငျး။ ဒီအလုပျကို စကျစုပျရှံရှာကွောငျး ။
ဒါမှမဟုတျ ယောကျြားက ကလေးတှနေဲ့ပဈထားခဲ့လို့ ဒီလောကထဲရောကျခဲ့ကွောငျး..။ သစ်စာမရှိတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျ ကွောငျ့ ရိုငျးရိုငျးပွောရ ရငျဖာလောကထဲရောကျလာကွောငျးပေါ့။
အပွငျလောကမှာ လိမျတဲ့ညာတဲ့သူဆို ကမြတို့အခငျြးခငျြးတောငျ ဟဲ့ကောငျမစကားကိုအမှနျဘယျတော့မှ မပွောဘူး တအားဖာစကားတတျတာဆိုတာမြိုး…ပေါ့..။
ဥပမာ ။ ။ ဟကေ့ောငျ မငျးဖာခေါငျးစကား မပွောနဲ့ စကားကိုတညျတညျတံ့တံ့ပွောစမျးဆိုတာမြိုး ကွားဖူးမှာပါ
ကမြ ဝါသနာအရ ဒီလောကထဲရောကျလာရပါတယျလို့ ဝနျခံတဲ့ ဖာသညျမရှိပါဘူး။
သူတို့ကိုသနားလို့ကယျတငျကွညျ့ပါ မရပါဘူး။ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပညာသငျပေးကွညျ့ စိတျမဝငျစားပါဘူး ပငျပငျပမျးပမျးမလုပျခငျြဘူး
ယောကျြားတဈယောကျနဲ့ပြျောပါးခငှေ က ၆၅၀၀ ပါ ခေါငျးကဘယျလောကျဖွတျပါတယျ။ နတေဲ့အတှကျအိမျလခ။ နောကျပွီးစားစရိတျ ဖွတျခံရလို့ ယောကျြားတဈဦးနဲ့ပြျောပါးမှ ၁၅၀၀ ပဲရပါတယျဆိုရငျ ပနျးရံတဈရကျ သုံးလေးထောငျရတယျ လုပျမလားမေး နပေူမခံနိုငျဘူး..။
အိမျဖျေါလုပျမလားမေး ပငျပမျးတယျ စြေးရောငျးမလားမေး ဝါသနာမပါဘူး..။
စကျခြုပျသငျပေးမယျ တဈယောကျကျိုပွောဘူးတယျ စကျခြုပျအခမဲ့သငျရငျ စကျဆရာမရဲ့ ကလေးထိနျး အဝတျလြျော မီးပူတိုကျ ထမငျးခကျြတော့လုပျပေးရမယျ ထမငျးကွှေးမယျ ဆရာမရဲ့ အကလြေးတှဆေငျမယျ ပညာသငျလို့ တတျရငျ လကျခနတှေ့ကျလေးပေးမယျ နောကျဆိုငျခှဲတဲ့အထိကူညီမယျဆိုတော့ စိတျဝငျစားတယျတဲ့…။
ဆရာမလငျမယားကလညျး သဘောမနောကောငျးတော့ သူ့ဘဝလေးကယျတငျခငျြလှနျးလို့ အကငျြ့စာရိတ်တကောငျးမှနျကွောငျး အပွညျ့အဝထောကျခံပွီးအပျပေးလိုကျပါတယျ။
လဈရငျလဈသလို အျောဒါလိုကျ နောကျဆုံးစကျဆိုငျရှေ့ ကောငျလေးတှတေရုနျးရုနျး ဆရာမယောကျြားနဲ့ အာဝါဟ ဝိဝါဟတှဖွေဈကုနျလို့ ရောကွေးတှပေေးလိုကျရပါတယျ။
ဆရာမနဲ့ကမြနဲ့ မိတျတှပေကျြ ကမြဆိုအသမေုနျးခံခဲ့ရတာ ဖာစကားယုံပွီးကယျတငျမိလို့ပါ..။
ုပွညျ့တနျဆာမကို အရငျးအနှီးထုတျပေးကွညျ့ အဲ့ပိုကျဆံကုနျတဲ့နေ့ တနျး ပွီး ဖာအိမျရောကျသှားတော့တာပါပဲ
ဖာသညျကနေ ကောငျးရောငျး ကောငျးဝယျလုပျစားပွီး မိနျးမကောငျးပွနျဖွဈသှားတာတော့ မကွားဖူးပါဘူး
အခွခေံစိတျဓါတျမကောငျးတော့ ဝါသနာနဲ့ပေါငျးပွီးဖွဈသှားတဲ့ ဖာဇတျလမျးတှေ ကမြတျောတျောမြားမြား အပွငျလောကမှာ လကျတှနေ့ားထောငျဖူးပါတယျ။ မွငျဖူးကွုံဖူးတှဖေူ့းပါတယျ။
နောကျကွောငျးတှကေအကုနျနီးနီး တူနကွေပါတယျ သနားအောငျ လုပျကွံဖနျတီးထားတဲ့ဇတျလမျး ကိုယျရေးရာဇဝငျအတုတှနေဲ့မကျြရညျကလြောကျအောငျသရုပျဆောငျကောငျးကွပါတယျ
သူတို့ပွောသလိုဆငျးရဲခြို့တဲ့တိုငျးသာဖာဖွဈရမယျဆိုရငျ ပနျးရံဆိုတာမရှိပါဘူး အိမျဖျေါဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး အလုပျသမား နစေ့ားဆိုတာမရှိတော့ဘူး ပလပျစတဈကောကျတဲ့သူ့မရှိဘူး စြေးတောငျးခေ့ါငျးပျေါရှကျတဲ့သူမရှိဘူး ပဲပွုတျသညျဆိုတာမရှိဘူး အကုနျ ဖာတနျးရောကျကုနျမှာပေါ့…။
ကမြတှဖေူ့းတဲ့မိနျးကလေးး တျောတျောလှတယျ ငယျတယျ အရိုငျးပနျးလေးပါ တျောတျောကို ဆငျးရဲနှမျးပါးတာပါ
တောနယျဘကျက ရယျခွငျးပွုံးခွငျးမရှိဘူး မကျြနှာလေးက ဆငျးရဲတော့ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျတညျငွိမျပါတယျ
ဗြူတီပါလာမှာ အပျပေးထားတယျ မနကျအစောကွီးထတယျ ။
ထမငျးခကျြ အဝတျလြျော ကလေးထိနျး အိမျဖျေါလိုအကုနျလုပျပေးရတယျ အိမျအလုပျတှေ မွနျမွနျပွီးမှ ဆိုငျရှငျက ဆံပငျပညာသငျပေးပါတယျ
သူက စတေနာပါတယျ။ခေါငျးလြျော အနှိပျကောငျးတော့ လာတဲ့သူက ခေါငျးလြျောရငျသူနဲ့ပဲနှိပျခငျြကွတယျ ပိုကျဆံပေးပွီးသငျထားတဲ့သူက လုပျပေးရငျ ဧညျ့သညျမကျြလုံးက ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့ ဟိုကလေးမရော မေးမေးနတေော့ နောကျပိုငျးဆိုငျရှငျက မကျြနှာသာပေးတယျ။ သူ့ကို အိမျဖျေါလိုမဆကျဆံတော့ပါဘူး ဆံပငျလေးလှလှပပပွငျပေးပွီး အဝတျအစားလေးဆငျပါတယျ။ ဆယျစုနှဈတဈစုကြျောတဲ့အထိ ဆိုငျမှာမွဲတယျ ဆိုငျရှငျရဲ့ဒုက်ခကိုလညျးခံခဲ့ရတော့ နောကျပိုငျးမိသားစုလိုဖွဈပွီး ခုဆို အဲ့ဆိုငျမှာ ပိုငျရှငျပွီးရငျသူပါပဲ ။
သူ့လကျသူခွမေို့ သူ့မောငျလေးနဲ့ သူ့အမကေို ချေါထားပါသတဲ့။
မွနျမာပွညျမှာ ဆငျးရဲနှမျးပါးသူတိုငျး ဖာမဖွဈပါဘူး။ မရှကျမကွောကျလုပျစားတတျရငျ ထမငျးမငတျပါဘူးလို့ပွောပွခငျြတာပါ ကမြကတော့ ဘယျတော့မှဖာစကားကိုမယုံပါဘူး ယောကျြားတျောတျောမြားမြား ကတော့ ဖာစကားယုံပွီး သနားတတျကွတယျ ကယျတငျခငျြကွတယျ ကိုယျခငျြးတှတေအားစာတတျကွတယျ။
အရမျးကိုကူညီခငျြကွတယျ ယောကျြားတျောတျောမြားမြားနဲ့ပါတျသကျထားတဲ့ဖာသညျတဈယောကျမှာ ပါလာနိုငျတဲ့HIV နဲ့တခွားရောဂါ အကွောငျးထကျ ဖာသညျတဈယောကျရဲ့နောကျကွောငျးက ပိုပွီး စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးခဲ့တာလားးဖာသညျတှကေ ပဲစညျးရုံးရေးကောငျးတာလား။ခုတဈလောဖာ post တှေ ကိုတခမျးတနားရေးထားတာတှရေ့ပွီးCom တှမှောမကျြရညျခြောငျးတှစေီးနတောတှလေို့ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျဖာသညျမရာဇဝငျရေးသားလိုကျရခွငျးဖွဈပါတယျ။
အသက်က ၃၂ နှစ် အရွယ် အပျိုစစ်စစ် အပျိုကြီးတစ်ယောက် ဟိုစိတ်တွေ ထိန်းလို့မရအောင် ဖြစ်နေချိန်
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် တရားစွဲခံခဲ့ရသည့် တစ်ပါးတည်းသော မင်းဧကရာဇ်
March 19, 2018 Apann Pyay Comments Off on ညှို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ ခယ်မလေးက အမနဲ့ မယူခင် သူနဲ့ တစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခန်းထဲလိုက်ပြီး ပျော်ပါးပေးပါလို့ တောင်းဆိုလာသောအခါ
ညှို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ ခယ်မလေးက အမနဲ့ မယူခင် သူနဲ့ တစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခန်းထဲလိုက်ပြီး ပျော်ပါးပေးပါလို့ တောင်းဆိုလာသောအခါ
လက်​မထပ်​ခင်​မှ ••••••••••••••• လွန်​ခဲ့တဲ့တစ်​ပတ်​က ကျွန်​​တော့်​ရဲ့​ကောင်​မ​လေးကသူ့အိမ်​ကို အလည်​​ခေါ်ပါတယ်​။သူ့အိမ်​​လည်း ​ရောက်​သွား​ရော့ တစ်​အိမ်​လုံးမှာ သူ့ညီမတစ်​​ယောက်​ပဲ ​တွေ့တယ်​။...
March 18, 2018 Apann Pyay Comments Off on အချိန်မတန်ပဲ ကြေမွသွားတဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်…. သင်္ကြန်ဆိုတာ ငါတို့အတွက် ဂွင်ဘဲကွ…။
အချိန်မတန်ပဲ ကြေမွသွားတဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်…. သင်္ကြန်ဆိုတာ ငါတို့အတွက် ဂွင်ဘဲကွ…။
အချိန်မတန်ပဲ ကြေမွသွားတဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့် ” ညဏ်လင်းထက်…….” ရှေ့ကို ထွက်ခဲ့စမ်း ဆိုတဲ့ ဆရာမ စကားသံ...
March 18, 2018 Apann Pyay Comments Off on လက်​မထပ်​ခင်